Fandaharanasa ‘Fianarana any Ivelany’ Amin’ny Fametrahana ny Mpianatra Hilona Anaty Kolontsain’ireo Fianakaviana Mpifindramonina ao Etazonia · Global Voices teny Malagasy
Fandaharanasa ‘Fianarana any Ivelany’ Amin'ny Fametrahana ny Mpianatra Hilona Anaty Kolontsain'ireo Fianakaviana Mpifindramonina ao Etazonia
Voadika ny 03 Mey 2017 2:07 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, 日本語, Português, polski, English
Armand Melk-Johnson, 15 taona, mamihina an'i Mariel, ilay anabavy mampiantrano azy, veloma. Sary: Max Nesterak
Ity tantara nosoratan'i Max Nesterak ity dia tao amin'ny PRI.org no nivoaka voalohany tamin'ny 21 Aprily 2017. Naverina navoaka etoana ho ampahany amin'ny fiarahana miasa eo amin'ny PRI sy ny Global Voices.
Nentin'i Armand Melk-Johnson nitety ny tranon'ilay fianakaviana mampiantrano azy aho, bungalow misy rihana iray sy tapany ao Minneapolis.
Miara-mipetraka amin'ilay reny mpampiantrano azy izy, Alicia sy ny zanany roa mbola kely , Mariel sy Thomas.
15 taona i Melk-Johnson ary kilasy fahasivy ao amin'ny Minnehaha Academy, sekoly tsy miankina iray ao Minneapolis ao Minnesota, efa mahasamihafa zavatra izay. Manatanteraka fandaharanasa iray izy io, antsoiny hoe “City Stay”, izay manome vintana ireo mpianatra mba hilòna ao anatin'ny kolontsaina iray vaovao mandritry ny herinandro. Amin'izao fotoana izao, anatinà fianakaviana Latino, Somaliana ary Hmong no ametrahan'ny sekoly ireo mpianany.
Nisafidy ny hiara-mipetraka amin'ity fianakaviana ity, izay manam-piaviana avy any Però, i Melk-Johnson. “Tena manohana ahy tanteraka ny reniko,” hoy izy. “Mampiseho fotsiny ny fomba fiainan'ireo Amerikàna hafa izy ity, ary tsy mampaninona mihitsy.”
Tsy manana antontan-taratasy momba azy i Alicia ary nanao fangatahana taminay mba tsy hilazàna ny anaram-pianakaviany. Avy any Però izy no tonga tao Minnesota, 11 taona lasa izay, ary samy teraka tao Etazonia ireo zanany roa, Mariel sy Thomas. Ambarany fa tiany ny mampiantrano ireo mpianatra mba hahafahan'ny zanany minamana aminà ankizy lehibe kokoa noho izy ireo.
Teny Anglisy vitsivitsy ihany no hain'i Alicia, ary mbola mianatra teny Espaniola i Melk-Johnson, saingy nolazainy fa afaka mifampita hevitra tsara izy ireo — na dia amin'ny alàlan'ny maso mifampitopy fotsiny aza. Avy hatrany dia nanomboka nandray an'i Melk-Johnson ho toy ny zokilahy be i Mariel sy Thomas.
“Tiako ny manana azy eto aminay,” hoy i Mariel. “Finaritra be izy miaraka amin'ny anadahiko, sady ho ahy dia zokilahy be tena tsara izy.”
Taona marobe tany aloha tany ny “City Stay” no noforonin'i Julie Knopp, mpampianatra tamin'ny akaninjaza tao aminà sekoly iray mampiasa tenimpirenena roa. Fandaharanasa iray niainany fony izy nipetraka tany El Paso, Texas no nahazoan'i Knopp ilay hevitra, ary nampitolagaga azy tamin'ny fomba entin'ny haben'ny hantsana ara-kolontsaina mampizarazara eny anivon'ireo vondrom-piarahamonina.
“Tena nientanentana tokoa momba ny hahafahako manao io fifanakalozana ara-kolontsaina io aho rehefa tafaverina, satria tsy hoe fotsiny mifampianatra ara-kolontsaina isika, fa sady mianatra teny iray vaovao koa, saingy amin'ny famakiana ireo fefy misakantsakana ao anatin'ny vondrom-piarahamonintsika no ahafahantsika manao izany, ary nanampy antsika hahatakatra misimisy kokoa ireo olona hitantsika amin'ny fiainana andavanandro,” hoy i Knopp.
Ho azy sy ireo mpikambana vitsivitsy ao amin'ny fitantanana dia mbola mitoetra hatrany ho tetikasa atao am-pitiavana tsy andraisana karama io. Hatreto, 60 ireo mpianatra manaraka ilay fandaharanasa ary 20 ireo fianakaviana mpampiantrano. Nolazain'i Knopp ihany koa fa nahazendana aza ny sasany amin'ny safidin'ireo mpianatra. Nanana mpianatra izy, Meksikàna-Amerikàna, izay misafidy ny hiara-honina aminà fianakaviana Latino. Ary mpianatra avy any Thailand sy Shina maniry hipetraka aminà fianakaviana Hmong.
“Nolazain'ilay mpianatra avy any Shina hoe, ‘Nipetraka tany Shina aho, ary nahita olona Hmong tany. Tonga teto Minnesota aho, mahita olona Hmong eto. Ary dia te-hahalala, iza moa ireto olona Hmong ireto? Te-hafantatra misimisy kokoa momba azy ireo aho,'” hoy i Knopp .
Milaza i Knopp fa izy koa dia vonona ny hanomboka fandaharanasa iray hanaovana izay hahafahan'ny mpianatra bebe kokoa miditra amin'ny fifanakalozana ara-kolontsaina. Tsy dia lafo ny “City Stay” raha oharina amin'ny fandaharampianarana mankany ivelany efa nahazatra hatrizay. Mahasarika isanjato betsaka amin'ireo mpianatra hafa volonkoditra ihany koa izy io, isan'ireny ireo mpianatra izao mahita ny tenan'izy ireo ho “Minnesotana vaovao.”
Ary tian'i Knopp hifandray ny olona.
“Tiako ilay hevitra afaka mikolokolo fifandraisana maharitra miaraka amin'ny mpiray vodirindrna aminao sady manohy mifampianatra avy amin'ny andaniny sy ny ankilany,” hoy i Knopp.
Talohan'ny nandaozany ilay fianakaviana, nasain'i Alicia nanome toky i Melk-Johnson fa hiantso sy hiverina hamangy azy ireo. Nolazainy fa hotanterahany izany.